Indlela iNzululwazi yokuConing iphuhlise ngayo ixesha
Imithetho kunye nezinye iimibhalo
Ngo-1885 uAgasti u-Weismann, uprofesa wezilwanyana kunye ne-anatomi yokufanisa kwiYunivesithi yaseFriberg, wathi i-genetic yolwazi yeseli yayiya kunciphisa njengoko iseli liye lahlukana.
1888 UWilhelm Roux wavavanya intsholongwane yeplasm ye-germs ngokokuqala ngqa. Enye iseli ye-2-cell frog embryo yabhujiswa ngesaliti eshushu; Isiphumo sasisiqingatha-embryo, sisekela imbono kaTeismann.
Ngowe-1984 uHans Dreisch wahlukanisa i-blastomeres e-2-no-4-cell-urchin yambrus embryos waza wabona ukuphuhliswa kwawo kuba ngamathubu amancinci. Le mvavanyo yayithathwa njengokwenqatshwa kwe-Weismann-Roux inory.
Ngowe-1901 uHans Spemann wahlula i-2-cell cell embryo ibe ngamalungu amabini, okubangele ukuphuhliswa kwezibilini ezimbini.
Ngowe-1902 uWalter Sutton washicilelwa "Kwi-Morphology yeChromosome Group e-Brachyotola magna", ecinga ukuba i-chromosomes ithwala ilifa kwaye ivela kwiimbini ezihlukeneyo ngaphakathi kwiseli yeeseli. U-Sutton uphinde waxela ukuba i-chromosomes isebenza njani xa isondo lesahlulo sahlula sisiseko seMendelian Law of Heredity.
Ngomnyaka we-1902 iimbumba zezilwanyana zaseJamani uHans Spemann zahlula i-slamander ye-2-celled cell and cell and cell cell. Ekugqibeleni oko kwakungavumelani ne-Weismann ye-1885 inkolelo yokuba inani lolwazi lofuzo kwiiseli liyancipha ngecandelo ngalinye.
Ngo-1914 u-Hans Spermann waqhuba kunye nokuvavanya kwangoko kwenyukliya.
Ngowe-1928 u-Hans Spemann wenza okunye, ukuphumelela kokutshintshwa kwezixhobo zenukliya.
Ngowe-1938 uHans Spemann washicilela iziphumo zovavanyo lwakhe lweemveliso zenyukliya ezihamba phambili ngowe-1928 ezibandakanya ama-embrasi e-salamander kwi-"Embryonic Development and Induction". U-Spemann ubhekisele kwisinyathelo esilandelayo sokuba uphando lube yimizimba ye- cloning ngokukhupha i-nucleus yeseluleli esahlukileyo kwaye uyibeke kwiqanda elincinci.
Ngo-1944 u-Oswald Avery wathola ukuba ulwazi lofuzo lweseli luqhutyelwa kwi-DNA
Ngowe-1950 Ukuqhwaba kwempompo yokuqala ye-bull ku -79 ° C ukugqitywa kweenkomo kamva.
Ngowe-1952 Ukutholwa kwezilwanyana zokuqala: uRobert Briggs noThomas J. King babamba amaqatha angasentla asele.
Ngo-1953 uFrancis Crick noJames Watson, basebenza kwiLebhu yeCavendish Laboratory, bafumanisa i-DNA.
Ngowe-1962 uBoologist uJohn Gurdon wamemezela ukuba wayesebenzela amaqatha aseMzantsi Afrika esebenzisa i-nucleus yamaseli omdala ahlukeneyo. Oku kuboniswe ukuba amandla omzimba weeseli ayancipha njengoko iseli yaba yinto ekhethekileyo.
Ngo-1962-65 uRobert G. McKinnell, uThomas J. King kunye noMarie A. Di Berardino bavelisa izibungu zokubhukuda kwii-oocytes ezinomsoco eziye zajojozwa ngabantu abadala befrog kidney carcinoma cell nuclei.
Ngowe-1963 I-biologist uJBS Haldane waqulunqa igama elithi "clone" entetho enesihloko esithi "Iingxaki zeMvelo kwiZityalo zoLuntu kwiMinyaka eyiShumi ezayo."
Ngowe-1964 I-FC Steward yakhula isityalo se-kroti esipheleleyo kwi-cell root root root.
Ngowe-1966 uMarshall Niremberg, uHeinrich Mathaei, kunye noSevero Ochoa baqhekeza ikhowudi yezofuzo, bafumanisa ukuba yintoni enye i-codon yokulandelelana echazwe nganye kwii-amino acid ezingamashumi amabini.
Ngowe-1966 uJohn B. Gurdon kunye no-V. Uehlinger bakhula ama-frogs asebekhulile emva kokufaka injecting tadpole cell cell intlinal nuclei kwi-oocytes enamafutha.
Ngo-1967 i-DNA ligase, i-enzyme ejongene nokubopha kunye nemida ye-DNA, yayingekho.
Ngowe-1969 uJacob Shapiero noJohnathan Beckwith babhengeze ukuba baye bahlula umgubo wokuqala.
Ngowe-1970 uHoward Temin kunye noDavid Baltimore ngamnye ngokuzimeleyo bahlula i-enzyme yokuqala.
Ngowe-1972 uPaul Berg wadibanisa i-DNA yezinto eziphilayo ezahlukeneyo, ngaloo ndlela kwakhiwa i-molecule ye-DNA yokuqala.
Ngowe-1973 uStanley Cohen noHerbert Boyer badala i-DNA yokuqala yokuphila ngokusebenzisa ama-DNA asetyenzisiweyo aphethwe nguPaul Berg. Kwakhona kwaziwa ngokuba yi-gene splicing, le nkqubo eyenza ukuba izazinzulu zisebenzise i-DNA yomzimba-isiseko sobunjineli bezofuzo.
Ngowe-1977 uKarl Illmensee noPeter Hoppe badala iigundane ezineomzali omnye.
Ngowe-1978 uDavid Rorvik wakhicilela incwadana Kwimifanekiso Yakhe: UkuConing of Man .
Ngo-1978 U-Baby Louise, owokuqala umntwana wakhulelwa nge- vitro fertilization, wazalelwa.
Ngowe-1979 uKarl Illmensee wathi ukudibanisa iintlanzi ezintathu.
1980 Kwimeko apho iDamondond v. Chakrabarty, iNkundla ePhakamileyo yase-United States inqume ukuba "ubomi obuphilayo, obuncinci bezinto ezincinci, buphathekayo."
Ngo-1983 uKary B. Mullis wenza i-polymerase chain reaction (PCR) ngo-1983. Le nkqubo inika ithuba lokuququzelelwa ngokukhawuleza kweziqwenga zeDNA.
Ngowe-1983 uDavor Solter noDavid McGrath bazama ukuqokelela iigundlo ngokusebenzisa i-version yabo yeendlela zokudlulisa zenukliya.
Ngowe-1983 Ugqithiso lokuqala lomama olusuka kunina lwagqitywa.
Ngo-1983-86 uMarie A. Di Berardino, uNancy H. Orr, kunye noRobert McKinnell batyalela i-nuclei ye-erythrocytes yabantu abadala, bafumana ukutya kwangaphambili nokunyusa ama-tadpoles.
Ngowe-1984 u-Steen Willadsen wabamba iigusha kwiiseli zebindi, umzekelo wokuqala wokuqinisekiswa kwezilwanyana ezinobungozi usebenzisa inkqubo yokudluliselwa kweenyukliya.
Ngowe-1985 uSteen Willadsen wasebenzisa indlela yakhe yokwenza i-cloning ukuze aphinde umvuzo wemfuyo embryos.
Ngo-1985 uRalph Brinster wadala imfuyo yokuqala ye-transgenic: iihagu ezivelisa ukukhula komntu.
Ngowe-1986 Ukusebenzisa iiseli ezincinane zeveki zinye, u-Steen Willadsen wayesebenzisa inkomo.
Ngo-1986 Umama onguMariya eBhetyhead wamtyhila ngokuzikhethela wazala umntwana uMntwana M. Wazama waza wahluleka ukugcina isigodlo.
Ngowe-1986 uNeal Wokuqala, i-Randal Prather, kunye no-Willard Eyestone basebenzisa iiseli zangaphambili ze-embroyo ukuze baqoke inkomo.
Oktobha 1990 Amaziko eZiko lezeMpilo kazwelonke asungula ngokusemthethweni iProjekthi ye - Human Genome Project ukuba ifumane iifom ze-50 000 ukuya kwii-100 000 kunye nokulandelelanisa i- nucleotides ezigidi eziyi-3 ze-genome yabantu.
Ngo-1993 uMnu. Sims no-NL Baqala ukubika ukudalulwa kwamathole ngokudluliswa kweenuclei kwiiseli zamabrionic.
Ngo-1993 ama-embrasi abantu ayenziwa kuqala.
NgoJulayi ka-1995 u-Ian Wilmut noKeith Campbell basebenzisa iiseli ze-embryo ezahlukileyo ukuze zihlanganise izimvu ezimbini, egama linguMegan noMorag.
NgoJulayi 5, 1996 uDolly, umgugu wokuqala oya kukhishwa kwiiseli ezindala, wazalwa.
NgoFebruwari 23, 1997 Inzululwazi kwiRislin Institute eScotland yamemezela ngokusemthethweni ukuzalwa "kweDolly"
NgoMatshi 4, 1997 uMongameli uClinton ucebise ukuxhatshazwa kweeminyaka emihlanu kwiphando lophando lomntu kunye noluntu oluxhaswa ngemali.
NgoJulayi 1997 U-Ian Wilmut noKeith Campbell, izazinzulu ezenza iDolly, nazo zadala i-Polly, imvana ye-Poll yaseDorset ehlanganiswe kwiiseli zesikhumba ezikhuliswe kwibhulebhu kunye nokuguqulwa kofuzo ukuze zinezinto zomzimba.
Ngo-1997 uNdunankulu uClinton wacebisa umyalelo wokunqanda ukunyunjwa kwabantu iminyaka engama-5.
Septemba 1997 Iwaka lamawaka ama-biologists kunye namayeza atyikitya ngokuzikhethela iminyaka emihlanu yokunqumbela abantu kwi-United States.
Ngomhla wama-5, 1997 uRichard Seed wamemezela ukuba wayefuna ukudibanisa umntu ngaphambi kokuba imithetho yomgaqo-nkqubo ingavimbela inkqubo.
Ekuqaleni kukaJan 1998 amazwe angama-19 aseYurophu atyikitya ukuvinjelwa kwe-human cloning.
NgoJan 20, 1998 Ulawulo loKutya nokuLawulwa kweeDrug luye lwazisa ukuba lunegunya phezu koluntu.
NgoJulayi ka-1998 uRyuzo Yanagimachi, uToni Perry, noTeruhiko Wakayama bamemezela ukuba baqoke amagundane ama-50 kwiiselula ezidala ukususela ngo-Oktobha 1997.
Jan 1998 I-Botechnology eqinile iPerkin-Elmer Corporation yamemezela ukuba iya kusebenza kunye ne-Genetic sequencing expert.
I-Craig Venture ekumapepheni kwiprogram yomntu.
Ubukhosi base-Ottoman kwi-Offensive: 1300 - 1600 - Isihlandlo seMfazwe
UAbhiogenesis kunye neVivolution
Ukufunda ibhloko yokwakha yabalingisi baseTshayina
Hawk Nelson - Biography
Kutheni Iingcongolo Zitshintsha Ubunzima Bakho Bomnwe?
Thatha uhambo lokubonwa kwee-20 leminyaka
Uphi i-JFK eya esikolweni?
Yenza i-Microsoft Access 2007 Database usebenzisa iSifanekiso
Ibali kunye nenjongo yeProjekti yokungabikho
Iingcamango zeProjekthi zeZenzulul
I-10 Abadumileyo Abangenayo